Fisaonana - Fiangonan'Andriamanitra manerana izao tontolo izao Soisa
lahatsoratra > Fiainana miaraka amin'Andriamanitra > Asa kely
Rivotra malefaka no nitsoka ny rivotra maraina rehefa nanala ny saina tamin'ny kintana sy kofehy avy tamin'ny vatam-paty manga sy volafotsy ny mpiambina haja miaramila, namoritra azy, ary nanolotra ilay saina ho an'ilay mpitondratena. Voahodidin'ny zanany sy ny zafikeliny izy, nanaiky am-pahanginana ny sainam-pirenena sy ny teny fankasitrahana noho ny asa fanompoana nataon'ny vadiny farany ho an'ny fireneny.
Ho ahy dia ny fandevenana faharoa tao anatin'ny herinandro vitsivitsy monja. Ireo namako roa, iray amin'ireo maty vady ankehitriny ary iray izay maty vady ankehitriny, dia namoy ny vadin'izy ireo mialoha ny fotoana. Samy tsy nahatratra ny "fitopolo" taona ara-Baiboly ireo roa maty ireo.
Ny fahafatesana dia zava-misy eo amin'ny fiainana - ho antsika rehetra. Gaga amin'ity zava-misy ity isika rehefa misy olona fantatsika sy tiantsika maty. Fa maninona no toa tsy vonona tanteraka hamoy namana na olon-tiana tanteraka isika? Fantatsika fa tsy azo ihodivirana ny fahafatesana, saingy miaina toy ny tsy ho faty mandrakizay isika.
Rehefa avy niatrika tampoka ny fahaverezantsika sy ny fahalementsika isika dia mbola tokony handroso ihany. Amin'ny fotoana fohy dia antenaina hanao zavatra toy ny mahazatra isika - ho olona iray ihany - kanefa fantatsika hatrany fa tsy hitovy velively isika.
Ny ilaintsika dia ny fotoana, ny fotoana handalovana ny alahelo - ny ratra, ny hatezerana ary ny fahatsapana ho meloka. Mila fotoana hanasitranana isika. Ny taona nentim-paharazana dia mety ho fotoana ampy ho an'ny sasany fa tsy ho an'ny hafa. Mampiseho ny fanadihadiana fa ny fanapahan-kevitra lehibe momba ny fifindran-toerana, ny fitadiavana asa hafa, na ny fanambadiana indray dia tsy tokony horaisina mandritra io fotoana io. Ilay tanora maty vady dia tokony hiandry mandra-pahatonga azy ho voalanjalanja ara-tsaina sy ara-batana ary ara-pihetseham-po indray vao handray fanapahan-kevitra lehibe amin'ny fiainany.
Ny alahelo dia mety hahakivy, mahakivy ary mandreraka. Na manao ahoana na manao ahoana mahatsiravina azy dia tsy maintsy mamakivaky ity dingana ity ireo maty. Ireo izay manandrana manakana na misoroka ny fihetseham-pony dia manalava ny zavatra niainany fotsiny. Ny alahelo dia ampahany amin'ny dingana tsy maintsy lalovantsika mba hahatongavana any amin'ny ilany hafa - mba hialana tanteraka amin'ny fahaverezan'ny alahelo. Inona no tokony antenaintsika mandritra io fotoana io?
Miova ny fifandraisana
Ny fahafatesan'ny vady dia manova ny mpivady ho mpitovo. Ny mpitondratena iray na ny mpitondratena iray dia tokony hanao fanovana lehibe eo amin'ny fiaraha-monina. Ny namanao efa manambady dia mbola ho sakaizany ihany, fa ny fifandraisana kosa tsy hitovy. Ny mpitondratena sy ny mpitondratena dia tsy maintsy manampy olona iray na roa farafaharatsiny ao amin'ny vondron'ireo namany izay mitovy toe-javatra. Ny olona iray hafa izay nijaly toy izany ihany no afaka mahatakatra sy mizara ny vesatry ny alahelo sy fatiantoka.
Ny filàn'ny olombelona indrindra ny ankamaroan'ny mpitondratena sy ny mpitondratena. Ny firesahana amin'ny olona mahalala sy mahatakatra izay mahazo anao dia mety hamporisika anao tokoa. Ary rehefa misy ny fotoana mety, dia afaka manome fampiononana sy fampaherezana mitovy amin'ny olona sahirana izy ireo.
Na dia mety tsy ho mora amin'ny sasany aza izany dia tonga ny fotoana tokony hamelantsika ara-tsaina ny sakaizantsika taloha. Na ho ela na ho haingana dia tsy tokony "hahatsiaro vady" intsony isika. Ny voadim-panambadiana dia maharitra "mandra-pisarahan'ny fahafatesana". Raha mila manambady indray isika mba hahatratrarana ny tanjontsika, dia tokony hanana fahalalahana hanao izany isika.
Tsy maintsy mitohy ny fiainantsika sy ny asantsika. Napetraka teto an-tany isika ary nomena fe-potoana tokana mba hamoronana ilay toetra ilaintsika mandrakizay. Eny, tokony hisaona isika ary tsy tokony hanafohezana ity asa fisaonana ity haingana loatra, fa taona vitsy monja no ananantsika eto amin'ity planeta ity. Tokony hihoatra an'io fijaliana io ihany isika amin'ny farany - tsy maintsy manomboka miasa, manompo ary miaina ny fiainana amin'ny fomba feno indray isika.
Mamaly ny fanirery sy fahatsapana ho meloka
Hiaina irery ianao miaraka amin'ny vadinao efa nodimandry nandritra ny fotoana ela. Ny zavatra kely rehetra izay mampatsiahy anao momba azy dia matetika hitomany. Mety tsy voafehinao rehefa tonga ireny tomany ireny. Andrasana izany. Aza menatra na menatra milaza ny zavatra tsapanao. Ireo izay mahalala ny toe-javatra misy azy ireo dia hahatakatra sy hankasitraka ny fitiavanao lalina ny vadinao sy ny fahatsapanao fatiantoka.
Mandritra ireo ora manirery ireo dia tsy hahatsapa ho manirery ianao fa hahatsapa ho meloka ihany koa. Ara-dalàna raha mitodika any aoriana ianao ka manao anakampo hoe: Tena hahafinaritra raha tonga lafatra isika rehetra, nefa tsy tonga lafatra. Mety hahita zavatra hahatsapantsika ho meloka isika rehetra rehefa maty ny iray amin'ireo malalantsika.
Mianara amin'ity traikefa ity, fa aza avela haharitra. Raha tsy naneho fitiavana sy fankasitrahana ampy ho an'ny vadinao ianao dia manapaha hevitra izao ho tonga olona be fitiavana kokoa izay manome lanja ny hafa bebe kokoa. Tsy afaka mamerina ny lasa isika, fa azo antoka fa afaka manova zavatra momba ny hoavintsika.
Maty vady efa antitra
Ny mpitondratena, indrindra ireo mpitondratena efa antitra, dia mijaly lava noho ny fanaintainan'ny fanirery sy alahelo. Ny fanerena amin'ny fijoroana ara-toekarena ambany sy ny fiarahamonina mpivady ipetrahantsika, ampiarahina amin'ny fanerena amin'ny fahanterana, dia matetika mandringa tokoa ho azy ireo. Fa raha iray amin'ireo mpitondratena ireo ianao dia tsy maintsy ekenao fa manana andraikitra vaovao amin'ny fiainanao ianao izao. Manana zavatra betsaka azo zaraina amin'ny hafa ianao, na firy taona ianao na firy.
Raha tsy namolavola ny sasany tamin'ny talentanao ianao noho ny adidinao amin'ny vadinao sy ny fianakavianao dia izao no fotoana mety hanitsiana azy ireo. Raha ilaina fiofanana fanampiny dia matetika misy sekoly na seminera misy. Mety ho gaga ianao mahita ny isan'ny olona manana volo fotsy ao amin'ireo kilasy ireo. Azo inoana fa ho hitanao fa tsy dia manana olana firy izy ireo amin'ny fampitoviana lenta amin'ireo mpiara-miasa aminy tanora kokoa. Mahagaga tokoa izay mety hataon'ny fandavan-tena matotra.
Fotoana hametrahanao tanjona. Raha tsy anao ny fanabeazana ara-dalàna dia diniho ny fahaizanao sy ny fahaizanao. Inona no tena tianao hatao? Mandehana any amin'ny famakiam-boky ary mamakia boky vitsivitsy ary lasa manam-pahaizana manokana amin'ny sehatra. Raha tianao ny manasa olona dia ataovy izany. Mianara mandray vahiny na mpampiantrano tsara. Raha tsy zakanao ny enta-mavesatra ilaina amin'ny sakafo atoandro na sakafo hariva dia asao ny tsirairay mitondra lovia. Mandraisa anjara bebe kokoa amin'ny fiainanao. Tongava olona mahaliana ary hahita olona hafa manintona anao ianao.
Tandremo tsara ny fahasalamanao
Lafiny iray tena lehibe tsy tokony holalovain'ny olona maro ny fahasalamana tsara. Ny fanaintainana noho ny famoizana olona iray dia mety hitsoka ara-batana sy ara-tsaina. Mety ho an'ny lehilahy indrindra izany. Tsy fotoana tokony hanaovana tsirambina ny fahasalamanao izao. Manome fotoana fanendrena hanao fanadinana ara-pitsaboana. Tandremo ny fihinananao, ny lanjanao ary ny haavon'ny kolesterola. Fantatrao ve fa azo fehezina ny famoizam-po amin'ny alàlan'ny fampidirana fanatanjahan-tena bebe kokoa amin'ny fahazarana isan'andro?
Arakaraka ny fahaizanao, mahazo kiraro ahazoana aina tsara ary manomboka mandeha. Manaova drafitra amin'ny diabe. Ho an'ny sasany, ny ora maraina dia tsara indrindra. Ny sasany dia mety maniry an'io amin'ny andro atoandro. Ny mandeha an-tongotra dia tsara ihany koa hetsika ampidirina miaraka amin'ny namana. Raha tsy vitanao ny mandeha dia mitadiava fomba hafa fampihetseham-batana. Fa na inona na inona ataonao dia manomboka mifindra.
Halaviro ny alikaola toy ny sakantsakana
Mitandrema fatratra amin'ny fampiasana alikaola sy zava-mahadomelina hafa. Betsaka no nanandrana namono ny aretiny tamin'ny alàlan'ny fanararaotana tamin'ny alikaola be loatra ny vatany na ny fampiasana fanafody mampitony tsy nampoizina. Ny alikaola dia tsy fanafodin'ny fahaketrahana. Mampitony. Ary toy ny fanafody hafa, mampiankin-doha. Ny mpitondratena sasany maty vady.
Ny torohevitra feno fahendrena dia ny fisorohana ny sakantsakana toy izany. Tsy midika izany hoe mila mandà tsy misotro amin'ny fotoam-piaraha-monina ianao, fa tena antonony foana. Aza misotro irery mihitsy. Tsy manampy koa ny misotro divay, vera amin'ny vera, na misotro toaka hafa hatoriana amin'ny alina. Manimba ny fahazarana matory ny alikaola ary mety hahatonga anao ho reraka. Miasa tsara kokoa ny vera misy ronono mafana.
Mifandraisa hatrany amin'ny fianakaviana. Ny ankamaroan'ny vehivavy dia izy no manoratra, miantso na mihazona fifandraisana amin'ny fianakaviana. Ny mpitondratena iray dia mety manana fironana tsy hiraharaha ireo adidy ireo ary mahatsiaro tena ho mitokana. Rehefa mandeha ny fotoana dia mety te hanakaiky bebe kokoa ny fianakavianao ianao. Ao amin'ny fiaraha-monina misy antsika, matetika dia miparitaka ny fianakaviana. Matetika ny mpitondratena na ny mpitondratena dia hita kilometatra an-jatony na an'arivony miala ny havany akaiky indrindra.
Fa avereno indray, aza maika. Ny tranonao efa ela, voahodidin'ny mpifanila vodirindrina aminao, dia mety ho fialokalofanao. Manomàna fihaonam-pianakaviana, diniho ny tetiaram-pianakavianao, manomboha boky momba ny tantaram-pianakaviana. Meteza ho fananana fa tsy tompon'andraikitra. Toy ny amin'ny toe-javatra rehetra amin'ny fiainana dia tsy tokony miandry fotoana hafa ianao. Tokony hivoaka ianao ka hahita azy ireo.
Mitadiava fotoana ahafahana manompo. Miaraha amin'ny sokajin-taona rehetra. Ny tanora tokan-tena dia mila afaka miresaka amin'ny olon-dehibe. Mila mifandray amin'ireo olona manam-potoana hanarahana ny sainy ny ankizy. Mila fanampiana ny reny tanora. Mila fampaherezana ny marary. Atolory ny fanampianao na aiza na aiza ilana fanampiana sy toerana ahafahanao manao izany. Aza mipetraka fotsiny ary miandry, manantena fa hisy hangataka anao handeha na hanao zavatra.
Aoka ianao ho mpifanolobodirindrina indrindra sy mpiara-monina tsara indrindra ao amin'ny sakana na trano sarotra. Andro vitsivitsy dia mila ezaka bebe kokoa noho ny hafa izy, saingy ho mendrika izany.
Aza atao ambanin-javatra ny zanakao
Tsy mitovy ny fomba ifandraisan'ny ankizy amin'ny fahafatesana arakaraka ny taonany sy ny toetrany. Raha manan-janaka mbola ao an-trano ianao dia tadidio fa tra-boina ianao amin'ny fahafatesan'ny vadinao toa anao. Ireo izay toa tsy mila saina firy akory dia ireo izay mila ny fanampianao indrindra. Ampidiro ao anaty alahelo ny zanakao. Raha miara-maneho an'izany izy ireo, dia hanjary hifankatia kokoa izy mianakavy.
Miezaha mamerina ny ankohonanao amin'ny làlana faran'izay haingana. Ny zanakao dia mila fitoniana izay ianao irery ihany no afaka manome azy ary mila izany koa ianao. Raha mila lisitry ny zavatra tokony hatao ny zavatra tianao hatao isan'ora sy isan'andro dia mitadiava azy.
Fanontaniana momba ny fahafatesana
Ny teboka ato amin'ity lahatsoratra ity dia zavatra ara-batana azonao atao hanampiana anao amin'ny fotoana sarotra indrindra amin'ny fiainanao. Fa ny fahafatesan'ny olon-tianao koa dia mety hitarika anao hanontany tena amin'ny hevitry ny fiainana. Ireo namana notondroiko tamin'ny fiandohan'ity lahatsoratra ity dia mahatsapa ny fahafatesan'ny vadinao, saingy tsy kivy izy ireo na tsy manana fanantenana amin'ny famoizana. Fantatr'izy ireo fa ny fiainana eto sy ankehitriny dia mihelina ary Andriamanitra dia manana zavatra betsaka kokoa ho anao sy ny olon-tianao mihoatra noho ny zava-tsarotra sy fitsapana amin'ity fiainana ara-nofo mandalo ity. Na dia faran'ny voajanahary aza ny fahafatesana, dia miahiahy lalina ny amin'ny fiainana sy ny fahafatesan'ny olona tsirairay izay an'ny olony Andriamanitra. Tsy ny fahafatesana ara-batana no farany. Ilay Mpamorona antsika, izay mahalala ny tsintsina rehetra milatsaka amin'ny tany, dia azo antoka fa tsy hanadino ny fahafatesan'ny zavaboariny olombelona iray. Fantatr'Andriamanitra izany ary miahy anao sy ireo olon-tianao ianao.
avy amin'i Sheila Graham